Friday February 21, 2020 - 16:57:56 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay amaro ku socda Dalladaha Waxbarashada, Maamul goboleedyadda iyo Dugsiyadda waxbarashada dalka.
War kasoo baxay Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu faray Bahda Waxbarashada oo ay ugu horeeyaan Dalladaha, Maamul Goboleedyada iyo Dugsiga Dalka in ay xogtooda kusoo gudbiyaan Xogta aan daabacneen ee (Online Database) oo ay kuwada shaqeynayaan.
Sidoo kale Wasaaradda sheegtay in ay joojisay in Dugsiyada laga soo qaado warqad ama Foomam Arday leeyahay oo sanadadii tagay la isticmaali jiray.
Dhanka Dalladaha waxa ay Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya fartay in ay ka sugeyso Tix ama Liis Arday oo Shabadeysan oo dugsi dugsi u xiran.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda ayaa lagu yiri "Wasaaraddu guud ahaan waxay joojisay in dugsi laga soo qaado warqado ama foomam arday leeyahay oo sanadyaddii tagay la isticmaali jiray, Wasaaraddu Dalladaha waxay ka sugaysa Tix ama Liis arday oo shabadaysan oo dugsi dugsi u xiran, Waxaa nidaamkan lagu bilaabay Gobolka Banaadir oo ilaa hadda 75% dugsiyadu si wanaagsan u wadaan shaqada”.
Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya waxa ay tilmaamtay in aanu jiri doon hal arday iyo hal dugsi oo ka maqnaan doono nidaamka cusub ee Wasaaradda.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa u qornaa sidan:-
Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare waxay la socodsiinaysaa dhammaan bahda waxbarashadda oo ay ugu horeeyaan Dalladaha Waxbarashada, Maamul goboleedyadda iyo Dugsiyadda waxbarashada dalka.
In wasaaraddu soo saartay nidaamka Waxbarashadda oo ay guud ahaan dugsiyadda dalku xogta kusoo gudbinayaan(Online Database).
Sidoo kale Nidaamkan waxaa kuwada shaqayn doona bahda waxbarashada guud ahaan.
Wasaaraddu guud ahaan waxay joojisay in dugsi laga soo qaado warqado ama foomam arday leeyahay oo sanadaddii tagay la isticmaali jiray.
Wasaaraddu Dalladaha waxay ka sugaysa Tix ama Liis arday oo shaabadaysan oo dugsi dugsi u xiran.
Waxaa nidaamkan lagu bilaabay Gobolka Banaadir oo ilaa hadda 75% dugsiyadu si wanaagsan u wadaan shaqada.
Fiiro gaar ah: Ma jiri doono hal arday iyo hal dugsi oo ka maqnaan doona Nidaamka cusub. Kaliya dugsiyada ayaa kala horeeya.